Ruvara HomePod mini Kuwedzera Kunotanga muAustralia neNew Zealand | IPhone nhau
Color HomePod mini kuwedzera kunotanga muAustralia neNew Zealand
Parizvino uye isu tese takamirira iyo nyowani HomePod mini kuti isvike kondinendi yekare mushure merunyerekupe rwakavaisa mukumisikidzwa muItari, Kambani yeCupertino ichangotanga iyo nyowani ine mavara HomePod mini muzvitoro muAustralia neNew Zealand. Iyi inogona kunge iri nhanganyaya yekuvhurwa zviri pamutemo munyika yedu uye mune dzimwe dzakawanda muEurope, saka nhasi tichave tichiziva zvakanyanya mafambiro ari pawebhusaiti yeApple.
Runyerekupe rwakavaisa muItaly nhasi Chipiri, Mbudzi 24
Manheru takaikurukura kurarama pane yedu Apple Podcast. Runyerekupe rwakaisa mavara matsva eHomePod mini muzvitoro zveApple muItaly nhasi uye mangwanani ano taona nhau mukati MacRumors pakusvika kwevashandisi muAustralia neNew Zealand. Parizvino izvi hazvina kuitika uye webhusaiti yeApple munyika iyoyo uye mune dzimwe inoratidza kutanga November uyu asati apera.
Iwo mavara matsva evatauri veApple ibhuruu, orenji uye yero, izvo zviri pachena zvinowedzera kune yakajairwa nhema uye chena edition yekutanga. Aya mamodheru matsva anongowedzera mutsauko muchitarisiko chekunze, hapana shanduko mukati mayo mukati kana kuvandudzwa kwakakosha kupfuura mavara pachawo. Mutengo muAustralia i $ 149 uye $ 159 yeNew Zealand. Munyika yedu ichiri 99 euros uye ndinovimba munguva pfupi iri kutevera vachatanga zviri pamutemo pamapeji epamutemo eApple uye muzvitoro.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » Apple zvigadzirwa » HomePod » Color HomePod mini kuwedzera kunotanga muAustralia neNew Zealand
Mugadziri BOE kutsiva LG semugadziri weOLED maratidziro eiyo iPhone muna 2023
13x13 Podcast: Yakaputsika Screen? Zvakanaka unozvigadzirisa